နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » PC ကွန်ပျူတာများအတွက် Tomb Raider ဒါကိုတော့ထ
PC ကွန်ပျူတာများအတွက် Tomb Raider ဒါကိုတော့ထ
အားဖြင့် အမ်မလီ Kenzie | ဒီဇင်ဘာလ 12, 2016
PC ကွန်ပျူတာများအတွက် Tomb Raider ဒါကိုတော့အထစွန့်စားမှုဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုလှည့်ကွက်နဲ့ action ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဂိမ်းရဲ့ storyline Kitezh ၏ဒဏ္ဍာရီမြို့၏ search အတွက်ဆိုက်ဘေးရီးယားသို့သူမလုပ်ငန်းများအဖြစ် Lara Croft အောက်ပါအတိုင်း. မသေခြင်း၏မြို့ရဲ့ကတိကိုမှသူမ၏ရိုက်နှက်မှာရည်ရွယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအပြင်းအထန်. ဒီဂိမ်းဟာအဓိကအားဖြင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးအပေါ်အလေးပေး. ထို့အပြင်, ကစားသူတစ်ဦးလည်းရှုခင်းကိုလေ့လာစူးစမ်းမည်နှင့်အမျိုးမျိုးသော optional ကို tombs.Camilla Luddington စကားသံကိုနောက်ကျောထနဲ့ Lara အဖြစ်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကို ပေး. စီရင်ဆုံးဖြတ်. ကစားသမားပြိုင်ဘက်အပြင်းအထန်တူကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများမှတဆင့် Lara ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရှိသည်, နှင့်ပဟေဠိပလက်ဖောင်းအပိုင်းပြီးသွား. သူမသည်တိုးနဲ့ဇာတ်လမ်းကတဆင့်သွားကွဲပြားခြားနားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုသည်. ထို့အပွငျ, Lara ဂိမ်းထဲမှာသူမရဲ့အားသာချက်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးချနိုင်ပါတယ်. သူမသည်ချုံသို့မဟုတ်သစ်ပင်များအတွက်ပုန်းရှောင်နိုင်. ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ Molotov ကော့တေးနှင့်ယာယီလက်ပစ်ဗုံးမူထိုးထွင်းမလုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ရန်သူများကိုအာရုံမှတ္ထုမှာမြှားရိုက်ကူး.
Camilla Luddington စကားသံကိုနောက်ကျောထနဲ့ Lara အဖြစ်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကို ပေး. စီရင်ဆုံးဖြတ်. ကစားသမားပြိုင်ဘက်အပြင်းအထန်တူကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများမှတဆင့် Lara ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရှိသည်, နှင့်ပြီးသွား ပဟေဠိပလက်ဖောင်းကဏ္ဍများ. သူမသည်တိုးနဲ့ဇာတ်လမ်းကတဆင့်သွားကွဲပြားခြားနားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုသည်. ထို့အပွငျ, Lara ဂိမ်းထဲမှာသူမရဲ့အားသာချက်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးချနိုင်ပါတယ်. သူမသည်ချုံသို့မဟုတ်သစ်ပင်များအတွက်ပုန်းရှောင်နိုင်. ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ Molotov ကော့တေးနှင့်ယာယီလက်ပစ်ဗုံးမူထိုးထွင်းမလုပ်ဖြစ်ပါတယ်, enemies.Additionally အာရုံမှတ္ထုမှာမြှားရိုက်ကူး, Lara ဖြတ်သန်းရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုး၏တန်ခိုးရှိပြီးလည်းသစ်ပင်များတက်ပြီးအားဖြင့်လုံးဝတိုက်ခိုက်ရေးရှောငျနိုငျ. လေးတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးအထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ပစ္စည်းများ Lara ကိုလိုက်ရှာနိုင်သည့်နှင့်ဆယ်မှသုံးစွဲဖို့လုပ်နိုင်ပါတယ်. Lara ရဲ့ပစ္စတို, တက်ပြီးပုဆိန်နှင့်သေနတ်များ, သူတို့ရဲ့မျိုးကွဲနှင့်အတူချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်တစ်ခုချင်းစီလှုပ်ရှားမှု၌ရှိကြ၏. အ Tomb Raider Cracked ဂိမ်းများ၏ထရှိ New ပစ္စည်းများ Mele များအတွက်အမဲလိုက်ဓါးပါဝင်သို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်မှုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်. တစ်ဦးကပြန်လည် breather လည်းရေအောက်ရှာဖွေရေးများအတွက်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်သော့ခတ်သေတ္တာနှင့် doors.Platforming စက်ပြင်ဖွင့်ရန်သော့ခတ်ရွေးလည်းဒေါင်လိုက်နံရံနဲ့ရေကူးဆန့်ကျင်က forward ခုန်ကဲ့သို့စွန့်စားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းများမှာ. Lura ထစ်ကနေအထစ်ခုန်အဖြစ်ကောင်းကင်ဘားပေါ် swinging ပါဘူးနိုင်ပါတယ်.
ထို့အပြင်, Lara ဖြတ်သန်းရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုး၏တန်ခိုးရှိပြီးလည်းသစ်ပင်များတက်ပြီးအားဖြင့်လုံးဝတိုက်ခိုက်ရေးရှောငျနိုငျ. လေးတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးအထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ပစ္စည်းများ Lara ကိုလိုက်ရှာနိုင်သည့်နှင့်ဆယ်မှသုံးစွဲဖို့လုပ်နိုင်ပါတယ်. Lara ရဲ့ပစ္စတို, တက်ပြီးပုဆိန်နှင့်သေနတ်များ, သူတို့ရဲ့မျိုးကွဲနှင့်အတူချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်တစ်ခုချင်းစီလှုပ်ရှားမှု၌ရှိကြ၏. ဂိမ်းထဲမှာနယူးပစ္စည်းများကို Mele များအတွက်အမဲလိုက်ဓါးပါဝင်သို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်မှုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်. တစ်ဦးကပြန်လည် breather လည်းရေအောက်ရှာဖွေရေးများအတွက်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်သော့ခတ်သေတ္တာနှင့် doors.Platforming စက်ပြင်ဖွင့်ရန်သော့ခတ်ရွေးလည်းဒေါင်လိုက်နံရံနဲ့ရေကူးဆန့်ကျင်က forward ခုန်ကဲ့သို့စွန့်စားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းများမှာ. Lura ထစ်ကနေအထစ်ခုန်အဖြစ်ကောင်းကင်ဘားပေါ် swinging ပါဘူးနိုင်ပါတယ်. The rise of the tomb raider PC crack solves your problems. Here are some features of rise of tomb raider crack.
အ Tomb Raider Cracked ဂိမ်းများ၏ထအံ့ဖွယ်အင်္ဂါရပ်များရှိခြင်း
ကစားသမားများကွဲပြားခြားနားသောမြှားအမျိုးအစားများတူပစ္စည်းများဖန်တီးနိုင်ပါတယ် (အဆိပ်, လက်ပစ်ဗုံး, ကြိုးကြီး, climbable, မီး) အပင်များနှင့်သတ္တဝါများကိုမှပစ္စည်းများ scavenging အားဖြင့်ဂိမ်းရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်.
ဥပမာ, ဒါကြောင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရဲ့လျှင် Lara တစ်ခုသာ hardier ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအင်္ကျီကိုဖန်တီးရန်နေ့၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အချိန်ကာလအတွင်းထွက်ကြွလာသောဝံပုလွေကိုလိုက်ရှာရမယ်
Mobility ကို features တွေ:
ဂိမ်းထဲမှာသေစေနိုင်သောထောင်ချောက်ကိုရှောင်လွှဲဖို့ dodging ပြုပါနှင့်ပြီးသွားတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ကောင်တာလုပ်ဆောင်နိုင်သ.
3: D Interface ကို:
တင့်တယ်ရှုခင်းများနဲ့လှပတဲ့နေရာများ, တောငျပျေါအမြင်များ, စသည်တို့ကို. စစ်မှန်သောအဘို့အဖြစ်ပျက်အရာအားလုံးခံစားရရန်ကစားသမားပေး. ကစားသမားအထဲတွင်ပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်ရစေသည်.
ဘယ်လိုအသုံးပြုနည်း & Tomb Raider ၏အက်ကွဲထ
ဂိမ်း directory ကိုအထဲကအက်ကွဲဖိုင်ကိုအစားထိုး
SpyHunter 4.28.0005 ရိုက်သံ
← အသေးအဖွဲ 2.22.1 Apk ကို crack wifi Hacker က Apk 2017 →
ကြံ့5ရိုက်သံ